OMG: Ndigonyiwe kwaye andazi ukuba bekuyintoni kuyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » abantu » OMG: Ndigonyiwe kwaye andazi ukuba bekuyintoni kuyo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zeMpilo • abantu • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Bekukho ntoni kugonyo lwam?
I-COVID-19 ibuya ngamandla. Uninzi lwabantu abaphela kwi-ICU okanye basweleke abagonywanga.
Eli nqaku linikezelwe kubo bonke abacinga ukuba HAYI MNA.
Ndigonyiwe kwaye hayi, andazi ukuba kukho ntoni kulo - hayi kwesi sitofu okanye kwezo ndazifumana ndisengumntwana, okanye kwiBig Mac okanye kwizinja ezishushu.
Andazi nokuba yintoni na ekwi-ibuprofen okanye amanye amayeza, iyayiphilisa intlungu yam.
Andazi zonke izithako kwisepha yam, ishampu, okanye isiqhumiso.
Andazi ifuthe lexesha elide lokusetyenziswa kwefowuni ephathwayo.
Andazi noba ukutya bendikutyele kule restaurant bekuphekwe ngezandla ezicocekileyo na.
Andazi ukuba iimpahla zam, iikhethini, iziselo zezemidlalo azikho mpilweni na.
Zininzi izinto endingazaziyo nendingasoze ndizazi.
Kodwa kukho into enye endiyaziyo:
Ubomi bufutshane, bufutshane kakhulu, kwaye ndisafuna ukwenza enye into ngaphandle nje kokuba "ndivalelwe" endlwini yam.
Ndisafuna ukwanga abantu ndingoyiki.
Njengomntwana nanjengomntu omdala, ndagonyelwa ipoliyo nezinye izifo ezininzi. Mna nabazali bam sasiyithembile inzululwazi yaye akuzange kufuneke ukuba ndibandezeleke okanye ndisasaze nasiphi na isifo endagonywa kuso.
Ngalo lonke ixesha ndiqhuba, ndibeka ubomi bam kumawaka abantu endingabaziyo kwaye ndinethemba lokuba baya kuhlala bekwicala labo.
Isebenze ubomi bam bonke ukuza kuthi ga ngoku!
Ngaphandle kokuthembana, abukho ubomi obunokuphila yaye akukho thando!
Andigonyelwanga ukukholisa urhulumente.
Ndigonyiwe ngenxa yokuba:
*Andifuni kufa ngenxa ye-Covid-19.
* Andifuni kusasaza i-Covid-19
* Ndifuna ukwanga abantu endibathandayo
*Ndisazivavanya ukuze ndingadluliseli uCovid
* Ndiyathanda ukuphila ubomi bam.
* Ndiyathanda ukwenza iCovid-19 ibe yinkumbulo endala.
* Ndifuna ukusikhusela.
* Ndiyathanda ukukhusela abo bangakwaziyo, oko kukuthi abantwana bethu abasacathulayo.
Ndigonyiwe kuba kukho ezinye izigulo ezimandundu ezinokufuna unyango kwigumbi labagula kakhulu, njenge
iingozi, ukuhlaselwa yintliziyo, umhlaza
Ndigonyiwe kuba ndiyakuthanda ukuhamba kwaye ndijonge ihlabathi!
Ukusuka kuthi sonke e eTurboNews kunye neWorld Tourism Network!
Nceda ugonywe !